साम्राज्ञी रवाफ – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsसाम्राज्ञी रवाफ
September 23, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अभिनेत्री रेखा थापापछि कुनै अर्की हिरोइनको जन्म नेपाली फिल्ममा भएको छ, जो हिरोलाई चुनौती दिने आँट गर्दैछिन् । रेखा थापाले हिरो नै आफू भन्दै सिनेमामा आफूलाई नै हाबी बनाएकी थिइन् । रेखा थापाले काम गरेको सिनेमामा हिरोको काम पनि छैन भनिन्थ्यो । रेखा थापापछि आएकी र केही बर्ष नम्बर १ को स्थानमा बसेकी प्रियंका कार्कीले आफूलाई बलियो बनाइनन् । उनले बरु चलेका हिरो र ब्यानरको पछि लागेर आफूलाई नम्बर १ हिरोइन मात्र बनाउन खोजिनन्, हिरोसँग प्रतिस्पर्धा चाहिनन् ।
प्रियंकाको अनुहार विक्न छाड्दै गर्दा उदाएकी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहमा अब त्यो रवाफ देखिन थालिएको छ । साम्राज्ञी नेपालमा हिरोका कारणले मात्र सिनेमा चल्ने कुरामा ठाडै धावा बोल्न थालेकी छिन् । साम्राज्ञीको यो आत्मविश्वासले काम ग¥यो भने उनी नेपाली सिनेमामा रेखा थापापछिकी सुपरस्टार अभिनेत्री हुनेछिन् । साम्राज्ञीले गोपिकृष्ण हलमा आयोजना भएको पत्रकार भेटघाटमा आफूले आफूलाई सधै नै माथि सोच्ने गरेको बताइन् ।
अभिनेताले गर्दा सिनेमा चल्छ भन्ने निर्मातालाई उनको ठाडै चुनौती थियो । होइन, अब अभिनेत्री पनि सुपरस्टार छन् र उनीहरुको अनुहारले पनि हलमा दर्शकको भिड लगाउन सक्छ भन्ने साम्राज्ञीको बयान थियो ।
साम्राज्ञीले हिरोलाई आफू चाहिने बताएर हिरो प्रधान सिनेमा इन्डष्ट्रीमा धावा बोलिसकेकी छिन् । साम्राज्ञीले अझै सिनेमा हिट दिइन् भने उनले सुपरस्टारडमको परिभाषा हिरोबाट हिरोइनमा सार्ने बाटो सोचेकी छिन् ।
अब, साम्राज्ञीको यो सोचलाई साथ दिन अरु हिरोइन अगाडि सर्छन् या सर्दैनन् भन्ने पनि छ । अरु हिरोइनले साम्राज्ञीका ठूला कुरा भन्दै हिरोको पछि नै लुत्रुक पर्न थाले भने उनलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
साम्राज्ञीको यो रवाफ कतिको गज्रिएको हो ? समयले विस्तारै बताउँदै जानेछ ।
इन्टु मिन्टुको प्रेमिएर शो भब्य रुपमा सम्पन्न ( फोटो भिडियो फिचर )
स्याम्पुको विज्ञापनको क्रममा यसरी परेको थियो अनुष्का र विराटको लभ
प्रियंका चोपडा र निक जोनास इटालीमा
गोविन्दाको फुलबुट्टा भरेर सकिएको अवार्ड
September 17, 2018 sutraentertainment Event, Feature News, Gossip, News, Reviews 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अवार्ड किन गर्ने ? अवार्ड कसका लागि गर्ने ? अवार्ड गरेर के फाइदा ? अवार्ड राम्राका लागि कि हाम्राका लागि ? यो प्रश्न सोध्ने हो भने अहिले अवार्ड आयोजना गर्ने आयोजकसँग कुनै […]